डा. केसी र सरकार बीच ५ बुंदे सहमति, अग्रवाललाई नै डीनमा निरन्तरता दिने – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
डा. केसी र सरकार बीच ५ बुंदे सहमति, अग्रवाललाई नै डीनमा निरन्तरता दिने
२०७४, २९ पुष शनिबार ०९:३७
काठमाडौं । सरकार र अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीबीच शुक्रबार राति ११ बजे सहमति भएको छ । सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा र केसीले ५ बुँदे पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सहमति गरेका हुन् ।